🥇 ▷ Macruufka 8.0.1 ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, ayaa la daabacay oo si dhakhso leh looga saaray ✅
Macruufka 8.0.1 ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, ayaa la daabacay oo si dhakhso leh looga saaray
iOS 8.0.1 ayaa la daabacay oo laga saaray daqiiqado
Apple waxay si dhakhso leh u daabacday ugana saartay cusboonaysiinta cusub ee nidaamka hawlgalka mobilada ee hadda jira, macruufka 8. Kani waa nooca iOS 8.0.1 loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada, kaas oo la heli karay daqiiqado laakiin ay ka noqdeen shirkadda Californian maxaa yeelay waxay umuuqataa in dadka isticmaala ay ka cawdeen dhibaatooyin ku saabsan aaladooda mobilada kadib rakibida.
IOS 8.0.1 hagaajinta waxaa ka mid ah hagaajinta burooyin kala duwan oo loogu talagalay macruufka 8 ee loogu talagalay iPhone iyo iPad
Imaatinka la rajeynayo ee casriyeyntii ugu horreysay ee iOS 8 ee la sii daayay ayaa run noqotay daqiiqado yar. Cusboonaysiintaan waxaa loogu talagay in lagu xaliyo dhiqlaha kaladuwan, oo aan ka heli karno qaar ka mid ah kuwa ka hadlay maalmihii dhawaa.
Cusboonaysiinta cusub ee la soo saaray iyo ka noqoshada cusboonaysiinta cusub ee loogu talagalay macruufka 8.0.1 Apple waxaan ku darayaa hagaajinta soo socota iyo hagaajinta cayayaanka:
Sax qaladka oo hadda u oggolaanaya codsiyada HealthKit oo laga heli karo App Store.
Xalinta mushkiladaha halkaas oo aan boogihii furayaasha soosaarayaasha kale aan laga xusho markii isticmaale uu galo koodhkooda.
Xalinta dhibaatada ka hor istaagtay codsiyada qaar inay galaan sawirada maktabadda sawirka.
Kalsoonida loo roon yahay ee hawlgalka “Easy Easy” ee ku jirta iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.
Xalinta dhibaatada sababtay adeegsiga lama filaanka ah ee ku xirnaanshaha macluumaadka taleefanka gacanta markii aad heleyso farriimaha SMS / MMS.
Ku habboonaan ka habboonaanta “Dalbashada wax iibsashada” shaqadda “Qoyska” xagga iibsiyada laga sameeyo codsiyada.
Xalinta dhibaatada taas oo mararka qaarkood sababtay in wicitaanada aan dib looga soo celin kaydinta iCloud.
Sax qaladka oo joojiyay gelitaanka sawirrada iyo fiidiyowga Safari.
Kadib markii la siidaayay casriyeyntaan loogu talagalay iPhone iyo iPad, 8.0.1, isticmaaleyaal badan ayaa bilaabay inay ka cawdaan dhibaatooyinka ku saabsan aaladooda ka dib markii la rakibay noocaan cusub. Dhibaatooyinka la tilmaamay inay ka mid yihiin, la’aanta isku xirnaanshaha shabakadda iyo dhibaatooyinka howlgalka ee ID ID ayaa inta badan la muujiyay.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay tilmaameen dhibaatooyin muhiim ah ka dib markii ay ku rakibidaan qalabka macruufka 8.0.1
In kasta oo adeegsadayaal badani ka dacwoodeen cusboonaysiintaan, Isticmaalayaasha kale ee ku guuleystey inay soo dejistaan ​​noocaan cusub ee ‘iOS 8’ ayaa faallo ka bixiyay inaysan la kulmin dhibaatooyinkaas midkood iyo, dhinaca kale, waxaa jira horumarin ku saabsan hawlgalka nidaamka moobaylka guud ahaan.
Sidoo kale, waxay umuuqataa in Apple go’aansatay inay ka laabato macruufka cusub ee 8.0.1 si loo saxo dhibaatooyinka ay isticmaaleyaashu bilaabeen inay silica isla marka ay cusboonaysiiyaan aaladooda, iyada oo ujeedadu tahay daabacaadda nooca cusub ee macruufka 8 ee xasiloonida.
Ma heshay kor u qaad macruufka 8.0.1? Haddii jawaabtaadu ay haa tahay, ha ka labalabeyn inaad noo sheegto, faallooyinka, haddii aad dhibaato ku qabtid dhibaatooyinkaas ama, taa bedelkeeda, waxaad dareentaa horumar.